Antsirabe : Mibaribary ny tsy Fanajana ny Zon’ny Ankizy. | mandimby maharo
Antsirabe : Mibaribary ny tsy Fanajana ny Zon’ny Ankizy.	Posted on 4 April 20145 April 2014 by Mandimby Maharo	Antsirabe , renivohitry ny faritra Vakinankaratra, Tanana iray 170 km miala an’Antananarivo no voalaza hatrizay fa Tanana lehibe faharoa eto Madagasikara. Malaza amin’ny orinasa maro miorina ao an-toerana koa I Antsirabe. Toerana mahasarika mpizahatany vahiny sy teratany avy amin’ny faritra maro koa. Mahasarika ireo mpihary noho izany ity Tanana ity noho ny asa maro azo atao ao.
Mampalahelo nefa ny mahita fa ny be dia be ireo zaza manao asam-barotra sy fihariana ao Antsirabe. Vao misy fiara na andian’olona mandalo ka maka toerana haka rivotra eny amin’ny araben’ny fahaleovantena manoloana ny Gara dia tamy mitangorona ireo zaza tsy latsaky ny dimy mivingitra harona kely. Ao ireo mivarotra sambos, yaourt, asatanana, na koa ireo mangataka vola kely amin’ireo mpandalo ireo. Hita menamenatra saingy tsapa koa fa tsy fidiny ho azy ireo ny manao izany. Ao ireo na ny milaza ny vidin’ny entana oentiny aza dia matahotra satria hita fa mahasadaikatra azy ny miresaka amin’ireto vahiny izay tsy mbola fantany akory. Izay ilay maha-zaza azy. Ireo entam-barotra rahateo tsy dia hoe manaraka ny fenitry ny fahasalamana na ny fahadiovana loatra, fa na be menaka sy mangatsiaka ohatra ny nems sy ny sambos dia marikivy sy mandranoka ny yaourt. Vitsy noho izany ireo mpividy ka lany andro mivezivezy manjeny ireo mpaka rivotra fotsiny ny ankamaroany.
Tsy milalao akory ity zazalahy kely ity. Miasa manosika ireo zaza mpivahiny te hitaingina itony fiarakely itony izy. 500ariary isaky ny ankizy no alainy amin’izany ka fihodianana ireo arabe manoloana ny Garan’Antsirabe no atao. Mahatratra 500m ny fihodinana iray. Tsy azy ity fitaovana ity fa hofainy amin’ireo olon-dehibe izay manana maromaro amin’izany. Fanambakana sy tsy fanajana zon’ny ankizy tsy azo lavina tsotra izao ity tranga ity saingy tsy misy mijery.Raha ny resaka nifanaovana amin’ireo tompo-tanana dia maro amin’izy ireny no zaza tsy mponina ao Antsirabe mandava-taona. Avy any ambanivohitra manodidina an’Antsirabe izy ireo fa saingy manaraka ireo ray aman’dreniny mifindra aty rehefa maitsoahitra toy izao. Iarahana mahafantatra tokoa mantsy ny fahasahiranana any antsaha any rehefa fahavaratra ka maro ireo lehilahy no miakatra ao Antsirabe hitarika posy na sarety. Mitondra ny vady aman-janany izy ireo ka ramatoa mivarotra hanimasaka na miasa an-trano, ny ankizy kosa dia ireo alefa mitondra entana mandehandeha ireo. Sitrany ahay mampitombo kely ny vola miditra rehefa hariva ny andro. Mazava ho azy noho izany fa tsy mianatra ireo zaza ireo.
Misy ireny toerana mandray zaza sahirana ireny ao an-drenivohitr’i Vakinankaratra ao. Misy ny fikambanana iraisam-pirenena toy ny Sos Village d’Enfants, Enfants du Soleil sy ireo akany tantanan’ny Relijiozy sy fikambanam-pinoana maro. Raha ny fanazana nomen’ny tompon’andraikitr’ireny akany ireny nefa dia voafetra ihany ny fahafahan’izy ireo mampiatrano ireny zaza “mahantra” ireny. Eo aloha ny tsy maintsy haneken’ny ray amandenin’izy ireo hametraka ny zanany any mandava-taona afahan’ireo zaza ireo mianatra tsy misy fiatona; fa eo koa ny sivana tsy maintsy apetraka noho ny hamaroan’izy ireo loatra. Noho izany dia ireo izay tena hita fa mandalo fahasahiranana toy ny sembana, kamboty na tsy misy mpiahy intsony no loha-laharana ho azy ireo.
Hatreto aloha dia tsy misy fepetra raisin’ny fanjakana sy ireo fikambanana miahy ny zon’ny ankizy hijerena manokana ireto zaza ireto. Tsy ao Antsirabe ihany nefa no fantatra fa isehoan’ny toe-javatra toy izao fa maro koa ireo Tanana ahitana zaza miasa raha eto Madagasikara. Ohatra niainanay ihany ity voalaza eto ity fa ny politika nasionaly hiahiana ny zaza mihintsy no mila apetraka eto Madagasikara hanatsarana izao loza mitataho amin’ny taranaka izao.
Tags: Antsirabe, Madagasikara, Zaza, Zon'ny AnkizyCategories: societé